Tun Tun's Photo Diary: Htan San Cave (ထမ်ဆမ်း လိူဏ်ဂူ)
Htan San Cave is 10 over miles from Ho Pone town. This Military Computer institution is located near Ho Pone Town. I have no idea why they built those institutions in remote area like this.
ဟိုပုံးမြို. နား တောဂျိုတောင်ကြားမှာ တပ်မတော် ကွန်ပြူတာ နှင့် နည်းပညာသိပ္ပံဆိုတာ ကို တွေ.လိုက်တော့ နည်းနည်းတောင် ၇ယ်ချင်မိတယ်။ ဘာလို. မြို.ထဲမှာ မထားပါလိမ့်။
The scenery along the way is breathtaking. But I have to help our driver to see the incoming vehicles, so I don't have much time to enjoy those scenery.
ထန်ဆမ်းကို သွားတဲ့လမ်းက တော်တော်လေးကြမ်းတယ်။ တဖတ်က ကားလာရင် ခဏ၇ပ်ပေးရတယ်။ တချို.နေရာတွေ လဲ အခုမှ လမ်းပြင်နေတုန်းရှိသေးတယ်။ လမ်းဘေး၇ူခင်းကတော့ အရမ်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖတ်က လာမည့် ကားကို အမြဲတမ်း ကြည့်ပေးနေရတဲ့ အတွက် ရူခင်းတွေ တောင် ကောင်းကောင်း မငမ်း လိုက်ရဘူး။
ကားဆ၇ာ ကိုမေးတယ်ေ၇ာက်သေးဖူးလား ဆိုတော့ေ၇ာက်တော့မှာေ၇ာက်တော့မှာနဲ. နောက်ဆုံးမှာတော့ ၂ နာရီလောက် မောင်းပြီးမှ ထန်ဆမ်းလှိုဏ်ဂူ ကိုေ၇ာက်ပါတယ်။ အစကတည်းက ဒီလောက်ဝေးမှန်းသိရင် ပင်းတယ တခုပဲ သွားပြီး တောင်ကြီးမှာ ပဲ နားလိုက်တယ်။ ဒီကို နောက်နေ.မှာ သပ်သပ်ထပ်လာမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့်ေ၇ာက်သွားတော့ လည်း တရက်တည်းနဲ. ပြီးသွားတာပေါ့လေ။
ဒါကတော့ ဂူအ၀င်ပေါက်ပါ။ သဘာဝလှိုဏ် ကို သမင်ရုပ်တွေ နဂါးရုပ်တွေ ထုလုပ်ထားပါတယ်။ အ၀င်မှာ အလှူငွေ ထည့်ပြီး အထဲ ကို ၀င်ပါတယ်။ မထည့်လဲ ၀င်လို.ရပါတယ်။
Finally, we reached Tan San Cave after2hrs + bumpy ride.
What make this cave so unique is that the way they crafted things look different from other Caves which you can find in other part sof Myanmar (Pindaya or Pake Chin Myaung).
Can you see the Unique look of Dragon beside the stream and deer on photo below? My first impression for this cave was "Wow!!". But I still don't have any idea what are the thing inside.
If you look up, you will see this? What about some stone drop on your head? :D
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဆို၇င် လှိုဏ်ဂူထဲ ၀င်ရင် safety helmet တွေ ဆောင်းပြီး ၀င်ကြတာ တွေ.ဖူးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဘယ်လှိုဏ်ဂူမှ အဲလို လုပ်တာ မရှိသေးပါဘူး။ အခု ဒီမှာလဲ အပေါ်မော့ ကြည့်လိုက်ရင် ကျောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေ အများကြီး ပဲ ခေါင်းပေါ်ကို တခုလောက် ပြုတ်ကျလိုက်ရင်တော့ မတွေးဝံစရာပဲ။ ဆိုင်ကယ်စီးပြီးလာရင်တော့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ် ဆောင်းပြီး ၀င်သင့်တယ်။း)
This is the entrance to go inside. It is quite dark inside and there is no visitor.
အထဲဝင်သွားတော့ နည်းနည်းမှောင်တယ်။ လာလည်တဲ့သူက ကျွန်တော်တို. အဖွဲ တစ်ဖွဲ.ပဲရှိတယ်။ အထဲမှာ စစ်သားလို လူတစ်စု ထိုင်နေတာတွေ.တယ်။ လက်နက်အပြည့်အစုံပါပဲ။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ စစ်သားလား သူပုန်လား မသိဘူး။ ငါကင်မရာနဲ. ဓါတ်ပုံ ရိုက်နေတာ အ၇စ်ခံရမလား ဆိုပြီး စိတ်ပူမိတယ်။ အရိပ်အကဲသိ၇အောင် စကားသွားပြောကြည့်တယ်။ အထဲ မှာ မှောင်နေတာ ဆက်သွားလို.ရလား ဘာတွေ ရှိလဲ ပေါ့။ သူပြောတဲ့ စကား အနည်းငယ်ပဲ နားလည်တယ်။ သူက ဘာပြောလဲ ဆိုတော့ "ခင်ဗျားတို.ေ၇ှ.ဆက်သွား။ သူက ကိုယ်သွားတဲ့ နေရာကို မီးထွန်းပေးမယ်ပေါ့"။ သူတို. ကလဲ ဖော်ဖော်ေ၇ွေ၇ွ ပြန်ပြောတော့ ခုနက ဓါတ်ပုံရသင့် မရိုက်သင့် ဓါတ်ပူနေတာတွေ မရှိတော့ဘူး။ Eco friendly ဖြစ်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်။ လာလည် တဲ့ သူသွားတဲ့ နေရာပဲ မီးထွန်း ပေးတယ်ဆိုတော့။ ကိုယ်ကလဲ ဒီလို ခက်ခက်ခဲခဲ လာပြီးမှတော့ ဓါတ်ပုံ အရမ်းကို ရိုက်ချင်တာကိုး။း)
Ok. We are now in the Cave and luckily they light up the place, so that I can take nice photos. There were4guys look like Burmese soliders but they are not (let me explain in next post) with full of weapons inside the cave. They made me think twice whether I should continue taking photos inside the cave or head back?. Will they make trouble with me if I obviously takealot of photos in front of them? Because there is no other visitor inside, so I was quite worry at that time.
Once we went inside, we was amazed by this spectacular stalactite formation. Do you see these four guys look like solider with guns? I thought they are Burmese solider but actually they are Pa Oh soliders. They cannot speak Burmese well. They look like 20+ years old.
Since I am new to this place. I worry they will make trouble on me. So I tried to talk to them like "Can we go further inside?, Is there any highlight of the Cave?" etc. They replied very politely and said that there arealot of thing to see if you go further inside. But It look very dark, so I asked them "So dark, we don't bring any torch light, how? ". They said,"You just walk, I will turn the light on for the place you explore.". It make sense to me because there is no point lighting up all place without any visitor. How clever they are?
As he said, we just walk further inside and one Pa Oh solider followed us and turn on the light for us. They are very friendly guys with guns. :D Too bad, they don't get 100% for my Burmese speaking. When we left, he turn off the light.
တကယ့်တော့ အဲ့ဒီ စစ်သားတွေက ပအို. စစ်သားတွေပါ။ အစိုးရနဲ. ငြိမ်းချမ်းေ၇း ယူထားပြီးသားပါတဲ့။ ကျွန်တော်တို.နောက်က စစ်သားတစ်ယောက်လိုက်ပြီး ပြီးထွန်းပေးတယ်။ ပြန်ထွက်လာရင် မီး ပြန်ပိတ်တယ်။ တခါတလေ သူစောင့်နေရမှာ အားနာလို. ဓါတ်ပုံကို မြန်မြန်လေး ရိုက်ခဲ့ရတယ်။
This cave is not over crowded with Buddha statue like other cave in Myanmar. It look more natural.
ကျွန်တော်ေ၇ာက်တုန်းက ၂၀၁၁ သြဂုတ်လပါ။ ဒီဂူက ပင်းတယ ဂူလို ဘု၇ားတွေနဲ. ပြည့် ညက်မနေပါဘူး။ သဘာဝ ကျောက်စက်ပန်းတွေ ကပိုများပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ မပြောတက်ဘူး။
The stalactites in this area look spectacular. I can only enjoyed it thought my camera view finder. If I fully enjoyed the view with my bare eyes, I will not had time to takealot of photos.
ဒီအပေါ်က ဓါတ်ပုံ လေးကို အရမ်းသဘောကျတယ် ကျောက်တွေ အရမ်းကို လှပါတယ်။ အလင်းေ၇ာင်မကောင်းလို. ဓါတ်ပုံတွေ ၀ါးနေတာ တခုပဲ။ အမှန်က အချိန်ရရင် Tripod လေးနဲ. ဇိမ်ပြေနပြေ ရိုက်ရမှာ။ ဓါတ်ပုံတွေပဲ တောက်လျှောက်၇ိုက်နေတော့ ရူခင်း တွေကို ကင်မ၇ာ စကရင် ကပဲ ကြည့်နေရတယ်။ တကယ့် ရူခင်းအစစ်ကို ကြည့်ဖို. အချိန်တောင် မရလိုက်ဘူး။
This is the poster of the monk who dreamed about this cave and he really discovered it in reality. How amazing?
ဒီ ပိုစတာထဲက ဘုန်းကြီး က ဒီလှိုဏ်ဂူကို အိမ်မက် မက်ပြီး ရှာဖွေ တွေ.ရှိခဲ့သူလို.သိရပါတယ်။ ဒီနေရာက လှိုဏ်ဂူ အဆုံးနေရာပါ။ အဲ့ဒီနားမှာေ၇တံခွန် ရှိပါတယ်။ မိုးတွင်းမို.လို.ေ၇စီးအရမ်းသန်တယ်။ တဝေါဝေါ နဲ. နေတာပဲ။
လှိုဏ်ဂူထဲမှာ အမြန်ဝင်ကြည့်ခဲ့တော့ အထဲမှာ ၁နာရီလောက်တောင် မနေခဲ့ရပါဘူး။ အလွန်ဆုံးကြာလှ ၄၅ မိနစ်ပေါ့။ လာခဲ့၇တဲ့ ခ၇ီးနဲ.တောင် မတန်ဘူး။ တကယ် ဆို အချိန်ရရင် ၂နာရီလောက် အေးအေးဆေးဆေး လျှောက်ကြည့်ချင်တယ်။ မိုးမချုပ်ခင် တောင်ကြီးရောက် ရမှာ ဆိုတော့လဲ သိပ် အချိန် မဆွဲ ချင်ဘူး။ေ၇ာက်ဖူးသမျှ လှိုဏ်ဂူ (ပင်းတယ၊ ပိတ်ချင်းမြှောင်) နဲ. ယှဉ်ရင်တော့ ဒီလှိုဏ်ဂူက တမူထူးခြားပြီး ကျောက်စက်ပန်းဆွဲတွေ တော်တော်လှတဲ့ လှိုဏ်ဂူပါ။
Finally, we reached the entrance of the cave and I really enjoyed the beauty of this cave which I have never seem it in my life.
They are Pa-Oh soldiers. Previously I thought they are Shan Rebels. According to my driver, Pa-Oh and Myanmar soldiers already got peace.I am not sure why they patrolling in suchareligious site? Even thought they are friendly, but I felt that it is not appropriate of seeing soldiers with full of weapons in this place.
I think this water comes from the waterfall inside the cave.
ဒီေ၇တွေက လှိုဏ်ဂူထဲကနေ ပြန်ထွက်လာတဲ့ေ၇တွေပါ။ မိုးတွင်းမို.လို.ေ၇စီးသန်တယ်။
We were now at the outside of the cave and returning to Taungyi.
ညနေ ၄နာ၇ီ ၄၅ လောက်မှာ ဒီနေရာကနေ တောင်ကြီး ကို ပြန်တယ်။ ကားဆ၇ာ ကပြောတယ်။ တကယ်လို.တောင်ကြီးကို ၀င်တာနောက်ကျရင် လ၀က က ၇စ်တက်တယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ. သူကလဲ အမြန်မောင်းတယ်။ လမ်းက ကျဉ်း၊ မိုးက၇ွာတော့ နည်းနည်း အန္တရယ်များတယ်။
We left from Htan San Cave at around 4:45pm. The driver told me, we should enter Taungyi as early as possible. Because there isatroublemaker security check at late evening. As he said, he drove very fast and I was so worry about safety.
ဟိုပုံးမြို. နားမေ၇ာက်ခင်မှာ မိုးတွေ အရမ်းသည်းတယ်။ ကားလမ်းချော်ပြီး တဖက် ကို ပြုတ်ကျလိုက်ရင်တော့ မတွေးဝံ့စ၇ာပဲ။ အစက မိုးစင်မှာ စိုးလို. ကားတံခါး ပိတ်မောင်းတာ။ နောက်တော့ ကားေ၇ှ.မှန် ပါးတင်းပေါက်ေ၇ငွေ.တွေ ၇ိုက်ပြီး ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး။၀ါးကုန်တယ်။ေ၇ှ.ကို ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဘူး။ ကားဆ၇ာ က မောင်း ကျွန်တော် က အ၀တ်စုတ်နဲ. ကားမှန်ကို သုတ် တော်တော်လေး ကို ခက်ခက်ခဲခဲ သွားခဲ့ရတာ ခရီးပါ။
Along our way to Htan San and Ho Pone Town, there wasavery heavy rain which almost wash down our car from the mountain road. The heavy rain outside & moisture inside the car made the car glass blur and we were almost invisible to anything in font of the car. The car glass wiper cannot help in this kind of rain. But the driver kept driving with care and I helped him wipe the moisture from the car glass to give him clear view. The rain stopped again when we approached to Ho Pone Town.
ဟိုပုံးမြို.လဲ ဖြတ်ကော မိုးက မ၇ွာပြန်ဘူး။ မြို.က တော်တော်လေး တိတ်ဆိတ်တယ်။ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေ သိပ်မ၇ှိဘူး။ ကျွန်တော်သာ အဲ့လိုမြို.မှာ နေရင် ပျင်းလို.သေမှာ။
တောင်ကြီး ၀င်ခါနီးမှာ မိုးက ပြန်က ပြန်ရွာပါတယ်။ ဒီတခါတော့ သိပ်စိတ်မပူတော့ဘူး။ လမ်းက ကောင်းလာပြီကိုး။ ခုနကားဆ၇ာ ပြောသလိုပဲ ရစ်တယ်ဆိုတဲ့ လ၀က နဲ.တွေ.ပါပြီ။ သူပြောတဲ့ အတိုင်းပဲ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေက ကားပေါ်က လူတွေကို သေချာကြည့်ပြီး မှတ်ပုံတင် တောင်းကြည့်တယ်။ ကားနောက်ဖုံးကိုဖွင့်ပြီး ဘာတွေ ပါသလဲ ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ မှ သွားလို.ရပြီ ဆိုပြီး လွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ကားဆ၇ာ ကပြောတာ "ခင်ဗျားတို. ကံကောင်းတယ်။ တချို.လူတွေဆို၇င် ရစ်ပြီး လက်ဖတ်၇ည်ဖိုးတွေ တောင်းတက်တယ်" တဲ့။
We encountered another rain on the way to Taungyi. But this time I didn't worry much because the road condition is much better and wider than the road between Htan San and Ho Pone.
As the driver expected, we encountered the security check before entering Taungyi. They asked "Any Tourists?, Where are you coming from? Where are you going next? ", and checked our Identity cards and let us go easily. The driver told us, we were very lucky and sometime they might ask for pocket money.
Anyway we reached Taungyi at 6:30 pm. It was suchawonderful trip. I will continue with Taungyi Trip next.
တောင်ကြီးမြို.ကို ညနေ ၆နာ၇ီ ခွဲလောက် ပြန်ေ၇ာက်တယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ သွားခဲ့ရပေမယ့် အင်မတန် လှပတဲ့ နေရာမို.လို. သွားရတာ တန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခရီးစဉ်ကတော့ ပြီးသွားပြီး ကားဆ၇ာ ကတော့ ရွေညောင်ထိ ပြန်ရဦးမယ်။
ကားငှားခ ဘယ်လောက်ကျသလဲ သိချင်တဲ့သူတွေ အတွက်။ အခု ခရီးစဉ် ညောင်ေ၇ွကနေ ပင်းတယ ->တောင်ကြီး -> ထမ်ဆန်း -> တောင်ကြီး အ တွက် ကားငှားခက ဆီဖိုးအပါအ၀င် အပြီးအစီး ၇သောင်းပါ။ ၂၀၁၁ တုန်းက ဈေးပေါ့။ ဈေးသင့်တယ်လို.ထင်ပါတယ်။
at 2/28/2014 10:53:00 PM